Ion Shanduro Resin, Cation Shanduro Resin, Anion Shanduro Resin - Dongli
Bengbu Dongli Chemical Co, Ltd. inotungamira inogadzira akasiyana siyana epamusoro giredhi ion kuchinjana resini muChina. Dongli's indasitiri yechigadzirwa mitsara inovhara SAC, WAC, SBA, WBA, MIXED BED uye hunyanzvi resin ine goho repagore re20000MTs (25000 M3) inorondedzerwa sebhizimusi giredhi…
SBA (CL, OH, hwaro hwemahara, Gel, Macroporous)
WBA (CL, OH, hwaro hwemahara, Gel, Macroporous)
CHIMWE CHIKOSHA UNOFANIRA?
Yakasarudzika-yakagadzirwa chigadzirwa kudhizaina, yekumaka, kunyora, kune ako akasarudzika zvido.
Iyo izere yekugona kugona yakagadzirirwa ndeye 30000 M3, inosanganisira Cation resin chirimwa, anion resin chirimwa, macroporous resin chirimwa.
Sekuguma kwa2020, iyo yakazara goho yakasvika 27000 M3, yakaunzwa mune 1000 + makontena.
Musika wekunze kwenyika:> 80%
Musika wepamba: <20%
Mari yekutengesa yakasvika $ 7.5 mamirioni na2020
242021 / Chikumi
Cation-exchange resins anoshandiswa kurapa hyperkalaemia nekukasira kurasikirwa kwe potassium kuburikidza neguvhu, kunyanya muchirevo chepoo ...
Cation exchange resin ruzivo
Cation-exchange resins anoshandiswa kurapa hyperkalaemia nekukasira kurasikirwa kwe potassium kuburikidza neguvhu, kunyanya muchirevo chehurombo husina kubuda kana dialysis isati yasvika (ndiyo nzira inoshanda yekurapa hyperkalaemia). Tsinga c ...
162021 / Chikumi
Chii chinonzi IX resin regeneration?
Chii chinonzi IX resin regeneration? Mukufamba kweimwe kana akawanda maekisheni ebasa, iyo IX resin inozopera, zvichireva kuti haichakwanise kufambisa ion shanduko. Izvi zvinoitika kana ioni inosvibisa yasunga kune angangoita ese masayiti anoshanda pane res ...
092021 / Chikumi
Cation exchange resin: ruzivo rwekutsinhana resin
Iyi sarudzo yeiyoni yekutsinhana resin inoenderana nezvinhu zvinotevera. Semuenzaniso, divalent ions inoshambadzwa zviri nyore pane ion monovalent. 2. Kune ion ine huwandu hwakaenzana hwekubhadharisa, iyo i ...